မြန်မာချစ်သူ စာကြည့်တိုက် - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ မြန်မာချစ်သူ စာကြည့်တိုက်
ကိုနိုင် မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
ဒီနေရာမှာဗဟုသုတများစွာကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ် လေ့လာပါ မှတ်သားပါ ဖတ်ကြည့်ပါ
သူငယ်ချင်းများ အလွယ်တကူဖတ်ရှု နိုင်စေဖို့ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ်ကလေးများအား ဝေငှထားပါတယ်။ ထပ်မံဖတ်ရှုလိုသော စာအုပ်များအားလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေတင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
Latest Activity: စနေနေ့ တွင် မျှဝေမယ် Twitter
အပျိုစင်တို့သိဖို့2အပျိုစင်တို့သိဖို့ ၃ အင်တာဖီးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တ္တု တိုများ ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ ချစ်ဦးညို ၀တ္ထုများ
အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကိုမောင်သွားထားလေမလား ရုက္ခစိုးနဲ့ အခြား ပြိတ္တာများ ရာဇကုမာရ ၀ိဇိတာဝီ ၀ိသာခါနှင့်သီတာ စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ ရှင်စောပု မလေးမဏိစန္ဒာ လင်္ကာဒီပချစ်သူ လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင် ချစ်သောပါဒဧကရီ ချစ်သူမင်းနန္ဒာ ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ယာဇ စာမရီသို့ထူးထူးခြားခြား မဏိစန္ဒာဥဒါန်း မဟာသေနာပတိ အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေမယ့် စကားများ ဆောင်းဝင်းလတ် - ဆူးလေးဆူးတယ်ခုးမယ် ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် ၀တ္ထုများ
ကျူးပစ်ဒ်၏ရင်ဖွင့်မြှား ကုန်ကြမ်း ပန်းနုရောက်ပြကွက်ထဲက ကကြိုးလှတဲ့သတို့သမီး သတ္တမမြောက်နတ်သမီး ခြံခုန်တဲ့ကြယ် အချစ်နဲ့နက္ခတ် နွေရင်ခွင်အတွက်နှင်းစက်အနမ်း ချစ်သူကိုတိုင် သွန်းခတ်ခဲ့သောသစ်သီးများ မိုးရထားပေါ်က လက်ပြတဲ့ကောင်မလေး မိုးကောင်းကင် လှည့်စားတဲ့ကြယ် အချစ်ကိုကြက်ခြေမခတ်ကြေး မဟာဆွေ ၀တ္ထုများ
အင်္ကျီပါး သူပုန်ကြီး စာရေးကြီး မင်းခိုက်စိုးစန် ၀တ္ထုများ
ဖိုးသူတော်ပြောသောပုံပြင် စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ် ခေတ်တစ်ခု၏အစ အဓိပါယ်တစ်ခု၏အဆုံး သုည ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲပက်လက် လမ်းဆုံ ကော်ဖီည ကလေးအတွေး မင်းလူ ၀တ္ထုများ
သင်္ခါရများ ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ အချစ်လို့အဓိပါယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ ငိုအားနဲ့ရယ်အား ခြေစစ်ပွဲများ အဖွားကြီးသုံးယောက်နဲ့စကားပြောခြင်း ဒေ၀တာမြို့တော စိန်အလွမ်း အီးကော်လံ လေထန်ဖုန်း ခြေစစ်ပွဲများ ညာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ ဖူးစာရှင်ကိုရွေးတော့မည် ပြတိုက်ထဲက ပြဇာတ် ငါးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ် ချစ်မြှားရှင်အစ ချစ်မြှားရှင်အဆုံး မင်းသိင်္ခ ၀တ္ထုများ
မြနန်းနွယ် မိုးနဲ့မြေ မ "တတ်ပါ့" မနောမရမြသက်လည် မနောမရကိုပီတာ မြိုင်ဟေ၀န် ပုဏ္ဏားဘကွန်း အပိုင်း၁ ပုဏ္ဏားဘကွန်း အပိုင်း ၂ တစ်ပွဲစားဦးနှော အပါအ၀င် အခြားဝတ္ထုတိုများ မိုးနဲ့အတူ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မြိုင်မဟာမမြလေး ပေတလူ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း ၁ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း ၂ မအောင်ရင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ ပျားဆွဲသောမုတ်ဆိတ် ဘမျိုးဘိုးတူဘယ်သ န်ဘမှန် မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော မြသန်းတင့်
လာခြင်းကောင်းသောအရှင်သခင် (ဘာသာပြန်) သမိုင်းစကား ပန်းစကားနှင့် အခြားရသစာတမ်းများ လာခြင်းကောင်းသောအရှင်သခင် (ဘာသာပြန်) လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (ဘာသာပြန်) ဂျူပီတာဖိုက် မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ ကြာညိုနံသင်းသောရေ၀တီမ ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည် မှောင်မိုက်မှာငို (ဘာသာပြန်) တိမ်းရှောင်သူ (ဘာသာပြန်) ၏ကရီဖွားစော (ဘာသာပြန်) မှော်ရုံတော်မှာ မောလှပြီ(ဘာသာပြန်) စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ (ဘာသာပြန်) # အနာဂတ်မျက်လုံးရှင် (အောင်ခန်.)
# နေဘုရားသားတော် (အောင်ခန်.)
# သူယောင်ရုပ် (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ကျော်လင်း Jan 18. စိုင်းစိုင်း ရေးထားတဲ့ ၀ထ္ထု လေးပါ
Started by လဲ့. Last reply by Thidar lwin Jan 8. စာရေးဆရာမ ဂျူး ရဲ့ စာအုပ်များ
Started by လဲ့. Last reply by Joy Jun 9, 2012. access denied ဖြစ်နေသူများ
Started by Ma Swezin. Last reply by winlwinoo Feb 1, 2012.ebook
Started by kyawthetnaing Jan 16, 2012. လီဒိုလမ်းမများဆိုတဲ့စာအုပ်လိုချင်လို့ပါကူညီပေးကြပါ
Started by AUNG KYAW MIN Dec 21, 2010. အောက်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ခရီးသွားမှတ်တမ်း (သိပ္ပံမောင်ဝ)
Started by Hopeless. Last reply by boy lay Oct 20, 2010. စာအုပ် ဖတ်ရတဲ့ အတွက်ကျေဇူးတင်ပါတယ်
Started byုကိုဖြိုးလေး Sep 19, 2010. အရှင်ဆန္ဒာဓိက ၊ ရဝေနွယ်-အင်းမ
Started by Hopeless Sep 10, 2010. ဂျာနယ်ကျော်မမလေး
Started by Hopeless Sep 10, 2010. မြတ်ဗုဒ္ဓ ဒေသနာ (ဒေါက်တာဝါလ်ပိုလာ)
Started by Hopeless Sep 10, 2010. မိုးမိုးအင်းလျား
Started by Hopeless. Last reply by Hopeless Sep 10, 2010. အားလုံးကြည်ရန်
စာကြည့်တိုက် ၂ သို့ သွားရန်
You need to beamember of မြန်မာချစ်သူ စာကြည့်တိုက် to add comments!
Comment by မြတ်ဗျူဟာ စနေနေ့ တွင် အလကာင်္၇ည်ကျော်ရဲ.စာအုပ်လေးတွေလဲတင်ပေးပါနော် Comment by Tin Tun Aung on March 3, 2013 at 5:28pm ဖတ် ပီးလေ့လာ ပါတယ် ခင်ဗျာ
Comment by နေလင်းထက် on February 9, 2013 at 8:55pm မင်္ဂလာပါ Comment by +ဦးဟန်ဂျူး+ on December 7, 2012 at 2:33pm ၀င်ရောက် ဖတ်ရူပြီးလေ့လာသွားပါတယ် ခင်ဗျာ Admin Comment by နံရိုး on December 7, 2012 at 11:49am ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခညာ Admin Comment by ♪♥♪♥ကိုယ်ရံတော်♥♪♥ on November 27, 2012 at 1:43pm ၀င်ရောက်ကြည်ရူသွားပါတယ်နော် Comment by nono on October 14, 2012 at 2:14pm ဗျူး စာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်တယ်.... Comment by သက်ပိုင်ဦး on September 28, 2012 at 2:49pm ဆရာ ညီညီနိုင်ရဲ. စာအုပ်လေးတွေများ ဖတ်လို.ရနိုင်မလားခင်ဗျာ။
Comment by yinyinnu on September 24, 2012 at 1:48pm Comment by min naing soe on September 24, 2012 at 1:25pm HAVE A NICE DAY ‹ နောက်သို့